Manamora Ny Fanafoanana Ireo Vondrona Mahery Fihetsika Ny Lalàna Indoneziana, Saingy Mety Hanohintohina Ny Fahalalahana Sivily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2017 2:08 GMT
Voakasiky ny lalàna vaovao izay manome fahefana ho an’ ny governemanta mba handràra ireo vondrona manohintohina ny firaisam-pirenena ihany koa ny fikambanan'ny daholobe Indoneziana. Sary Flickr an'i Jordi Bernabeu Farrús (CC BY 2.0)
Nandany ny didy hitsivolan'ny filoham-pirenena ho lalàna ny solombavambahoaka Indoneziana izay manome fahafahana ho an'ny governemanta mba hanafoana fikambanana na dia tsy misy didim-pitsarana mialoha aza, nampitandrina anefa ireo manam-pahaizana momba ny lalàna sy ireo mpikatroka mpiaro zon'olombelona fa mampidi-doza ny fahalalahana sivily izany.
Filoha Joko Widodo (Jokowi) namoaka ny fanitsiana naroso tamin'ny Lalàna laharana 17/2013 momba ny Fikambanana Fiarahamonina Sivily tamin'ny 10 Jolay 2017. Raràn'izany lalàna izany ireo vondrona manitsakitsaka na manohintohina ny foto-kevitra fanajana ny fahamaroan-kevitra fantatra amin'ny anarana hoe Pancasila.
Nilaza i Jokowi fa ilaina ny miaro ny firaisam-pirenena sy ny fahasamihafana ao amin'izao fitomboan-kerin'ireo vondrona islamika mahery fihetsika izao.
Ahitana Silamo betsaka indrindra manerantany i Indonezia ary miezaka mampiroborobo ny fomba fijery tony amin'ny finoana silamo. Saingy tato anatin'ny taona vitsy, lasa mahery setra ireo fikambanana sasantsasany amin'ny fampiharana an-katerena ny foto-pampianaran'izy ireo tsy mandefitra, izay niteraka tahotra amin'ny fihanaky ny fanavakavahana ara-pivavahana.
Raha ny tena izy, te handràra ireo vondrona toy ny Hizbut-Tahrir Indonezia (HTI) izay mikendry hanangana kalifa ao amin'ny firenena ny governemanta. Ny HTI dia iray amin'ireo vondrona nanetsika ireo mpanaraka azy an'aliny ary nahomby tamin'ny antsony hanongana ny governora Kristianina ao Jakarta, izay voampanga ho tsy manaja ny silamo. Mpiara-dia amin'i Jokowi i Ahok, governoran'i Jakarta teo aloha.
Raha maro ireo vondrona laika sy mpikatroka zon'olombelona manohana ny hetsiky ny governemanta manohitra ny HTI, naneho mafy ny ahiahiny mikasika ny fiantraikan'ny lalàna vaovao momba ireo vondrona hafa ao amin'ny firenena izy ireo. Nanipika izy ireo fa manome fahefana lehibe ho an'ny mpanatanteraka sy tsy filazalazana be loatra ny fanapahan-kevitra mikasika izay vondrona heverina ho loza mitatao amin'ny firaisam-pirenena ny lalàna vaovao. Nilaza koa izy ireo fa manohintohina ny fahalalahana sivily sy ny zon'olombelona hafa voalazan'ny lalàmpanorenana ny didim-panjakana.
Jakarta Post namoaka lahatsoratra fampitandremana manoloana ny “fananganana ho velona ny avelon'ny didy jadona”
Manome fahefana ho an'ny governemanta ny lalàna vaovao mba handràra izay fikambanana na vondrona izay tiany eny ifotony ka mifanohitra amin'ny foto-kevi-panjakana na ny lalàm-panorenana ny sehatra na ny zavatra ataon'izy ireo.
Tsy misy ny antoka fa tsy ho halaim-panahy hampiasa ny fahefana vaovao mba hampangina ireo tsikera na fanoherana amin'ny alalan'ny filazana fa fiarovam-pirenena ny governemanta amin'izao fotoana izao na ny ho avy.
Nanomboka ny taona 1965 hatramin'ny taona 1998, notantanan'ny Jeneraly Suharto izay voampanga ho nanitsakitsaka ny zon'ireo Indonezianina an'arivony i Indonezia.
Nandinika ny lalàna Ny Fikambanana Indoneziana Manampy amin'ny Lafiny Ara-Pitsarana ary namintina fa “manohy amin'ny fomba fandikana hevitra marobe amin'ny andininy momba ny fitenenan-dratsy” izany izay mety hitarika fanamelohana izay hetsika heverin'ireo eo amin'ny fahefana fa fandrahonana.
Nampahatsiahy ny governemantan'i Jokowi i Usman Hamid, talen'ny Amnesty International Indonesia, fa misy safidy tsara kokoa hiadiana amin'ny fironana mitrifatrifana:
Misy ny fomba maro ny fiadiana amin'ny fironana mitrifatrifana sy hiarovana ny firaisana ara-tsosialy atolotra ny governemanta Indoneziana . Tsy ny fanesorana ny fiarovana ara-pitsarana lehibe rehetra momba ny fahalalahana ara-pikambanana no fomba hanaovana izany. Manohitra mazava ny iraka anti-demokratika ataon'ireo vondrona tahaka ny Hizbut Tahriri Indonesia ireo mpanao politika plioralista Indoneziana sy ny fiarahamonim-pirenena. Toy izany koa isika. Saingy tokony ekentsika fa ireo lalàna izay miaro ny HTI amin'ny hetsika jadona ataon'ny fanjakana dia ireo izay miaro ny herin'ny demokrasia sy ny zon'olombelona ihany koa.
Mpampianatra ambony, Deasy Simandjuntak, nanontany momba ny fomba fiasa nataon'ny governemanta tamin'ny fiadiana amin'ny vondrona toy ny HTI:
Sarotsarotra ny toerana misy ny governemanta Indoneziana satria mivezivezy eo anelanelan'ny filàna filaminana sy fiarovana izy etsy andaniny, ary ny andraikiny demokratika amin'ny fiarovana ny fahalalahana ara-politika ho an'ny Indoneziana rehetra etsy ankilany.
Miantso ny firotsahana an-tsehatra lehibe avy amin'ny governemanta ny fitomboan'ny tsy fandeferana mba hanakana ny fihanak'ireo vondrona mahery fihetsika. Na izany aza, ny fanontaniana dia hoe ny fanitaram-pahefana izay manome fahefana mangina ho an'ny fitondrana indoneziana mba hamaritra izay vondrona hosaziana ve no no fomba tsara indrindra handrosoana.
Ho azy kosa, nanizingizina ny governemanta fa mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ny lalàna. Nankasitraka ny antson'ireo antoko sasany mba handinika ny ampahany amin'ny lalàna i Jokowi Tamin'ireo mpikambana 445 ao amin'ny Antenimieram-pirenena, mpikambana 314 be izao no nifidy handany ny lalàna. Enina tamin'ireo antoko politika 10 kosa no nankasitraka ny fepetra.